NevaCoin စျေး - အွန်လိုင်း NEVA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို NevaCoin (NEVA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ NevaCoin (NEVA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ NevaCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
NEVA – NevaCoin
Market ကဦးထုပ်: $20 468.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ NevaCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
NevaCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
NevaCoinNEVA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0231NevaCoinNEVA သို့ ယူရိုEUR€0.0196NevaCoinNEVA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0177NevaCoinNEVA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0211NevaCoinNEVA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.21NevaCoinNEVA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.146NevaCoinNEVA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.517NevaCoinNEVA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0866NevaCoinNEVA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.031NevaCoinNEVA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0323NevaCoinNEVA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.518NevaCoinNEVA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.179NevaCoinNEVA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.125NevaCoinNEVA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.74NevaCoinNEVA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.3.89NevaCoinNEVA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0318NevaCoinNEVA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0351NevaCoinNEVA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.723NevaCoinNEVA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.161NevaCoinNEVA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥2.45NevaCoinNEVA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩27.55NevaCoinNEVA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦8.77NevaCoinNEVA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.71NevaCoinNEVA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.64
NevaCoinNEVA သို့ BitcoinBTC0.000002 NevaCoinNEVA သို့ EthereumETH0.00006 NevaCoinNEVA သို့ LitecoinLTC0.000404 NevaCoinNEVA သို့ DigitalCashDASH0.00024 NevaCoinNEVA သို့ MoneroXMR0.000248 NevaCoinNEVA သို့ NxtNXT1.71 NevaCoinNEVA သို့ Ethereum ClassicETC0.00331 NevaCoinNEVA သို့ DogecoinDOGE6.67 NevaCoinNEVA သို့ ZCashZEC0.00025 NevaCoinNEVA သို့ BitsharesBTS0.918 NevaCoinNEVA သို့ DigiByteDGB0.867 NevaCoinNEVA သို့ RippleXRP0.0793 NevaCoinNEVA သို့ BitcoinDarkBTCD0.000796 NevaCoinNEVA သို့ PeerCoinPPC0.08 NevaCoinNEVA သို့ CraigsCoinCRAIG10.53 NevaCoinNEVA သို့ BitstakeXBS0.985 NevaCoinNEVA သို့ PayCoinXPY0.403 NevaCoinNEVA သို့ ProsperCoinPRC2.9 NevaCoinNEVA သို့ YbCoinYBC0.00001 NevaCoinNEVA သို့ DarkKushDANK7.41 NevaCoinNEVA သို့ GiveCoinGIVE50.01 NevaCoinNEVA သို့ KoboCoinKOBO5.38 NevaCoinNEVA သို့ DarkTokenDT0.0213 NevaCoinNEVA သို့ CETUS CoinCETI66.67
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 07 Aug 2020 20:50:03 +0000.